प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ‘जेष्ठवासादी चूर्ण’को माग धान्नै मुश्किल, के हो जेष्ठवासादी चूर्ण ? Nepalpatra प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ‘जेष्ठवासादी चूर्ण’को माग धान्नै मुश्किल, के हो जेष्ठवासादी चूर्ण ?
प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ‘जेष्ठवासादी चूर्ण’को माग धान्नै मुश्किल, के हो जेष्ठवासादी चूर्ण ?
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै पछिल्ला केही दिनयता रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक जडीबुटीयुक्त चूर्णको माग निक्कै बढेको छ । विभिन्न जडीबुटीबाट तयार गरिएको जेष्ठवासादी मिश्रण चूर्ण निःशुल्क वितरण गर्दै आएको आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीलाई हाल उक्त चूर्णको माग धान्न हम्मेहम्मे परेको छ ।